सन्दर्भ: एनआरएनए अमेरिका चुनाव, स्वतन्त्र र सक्षमलाई मात्र मतदान गरौं – Durbin Nepal News
सन्दर्भ: एनआरएनए अमेरिका चुनाव, स्वतन्त्र र सक्षमलाई मात्र मतदान गरौं
उमापति भुषाल २६ बैशाख २०७६, बिहीबार ००:३२
अहिले नेपाली आप्रवासी नेताहरूलाई अमेरिकामा भ्याई नभ्याई छ एनआरएनएको निर्वाचनले। तर भोट कसलाई के आधारमा दिने यो चाहिं बिचार गर्नुपर्ने बिषय बनेको छ। यो संस्था समस्त गैर आवासीय नेपालीहरूको लागि स्थापित हो। सदस्यता लिएका वा प्राविधिक कारणले लिन छुटेका सबैको यसमा सरोकार छ र हुनुपर्दछ। एकातिर जसका लागि यो संस्था हो आम रूपमा त्यति धेरै सम्बन्धित पक्षको सरोकार देखिंदैन भने अर्को तर्फ हामी तपाईंहरूको सेवा गर्छौं मौका दिनुस् भन्दै हिंडेको देखिन्छ। कतिपयले त सदस्यता बनाउनका लागि समेत लगानी गरेको प्रसस्तै सुनिएका छन्।
तर यसैबीचमा नेपालको राजनीतिक आस्थाका आधारमा समेत एनआरएनएको चुनावमा उम्मेदवारहरुको गुट-उपगुट बनेको र अझै त्यसैका आधारमा मत माग्न थालिएको छ। केहीले त सामाजिक संजालमा नै अमुक पार्टीको झण्डा नै प्रयोग गरेर त्यस पार्टीका बाहेक अरुलाई मत नदिन अपील समेत गरेको देखिएको छ। हो, हामी सबैसँग कुनै न कुनै वैचारिक आस्था या त विगतदेखि छ या अहिले बनेको छ। जे भएपनि हुबहू आफ्नो दृष्टिकोण लाद्न खोज्नु NRNA जस्ता गैर राजनीतिक संस्थाको लागि ठूलो अभिशाप हो, जुन यहाँ भैरहेको छ।जसको फलस्वरूप परदेशमा एकताबद्ध भई बसेको नेपाली समुदाय विभाजित हुन पुगेको छ। राजनीति नै गर्नुछ भने गर्नुस् नेपालको वा यहाँको तर NRNA मा नगर्नुस्।राजनीति गर्न NRNA को नकाव लगाएर नआउनुहोस् र जबरजस्ती ईच्छा नहुनेलाई त्यसमा नहोम्नुस्।
आफ्नो पारिवारिक परिस्थिति आफ्नो सापेक्ष बनाउनुहोस् , कुनै लोभ लालचामा नलागी सामाजिक काममा ध्यान दिनुस् र नि: स्वार्थ भावनाले तपाईंको श्रम र ज्ञान सीपका आधारमा सेवा गर्नुस्।तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने खर्च गर्नु पर्दैन। हो, तपाईं सम्पन्न हुनुहुन्छ , समुदायलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने चुनाव बाहेकका अरु समयमा गर्नुहोस्। होइन भने खर्च किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं चुनाव जित्नैका लागि खर्च गर्नु हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईं योग्य हुनुहुन्न र तपाईंको नियत पनि ठीक छैन।
हामीलाई बिगतका गल्ती र कमजोरी हटाउने नेतृत्व चाहिएको हो , निरन्तरता दिने होइन। र, हामी यसलाई तटस्थ बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ न कि नेपालका राजनीतिक दलका भातृ संगठन! त्यसैले NRNA एउटा अभियान हो आज नै वा आफूले नै सबै सक्नुपर्छ भन्ने छैन। जति सकिन्छ, राम्रो गर्न प्रयास गरौं।आफूलाई तटस्थ बनाउन प्रयास गर्नुस् । हामी त्यसैको पक्षमा छौं।सेवाभावले प्रेरित हुनुहोस् तपाईंले पराजय नै भोग्नु पर्दैन। अर्को पटकदेखि NRN अभियानमा नेतृत्व गर्ने हो भने अहिलेदेखि नै समुदायको सेवा गर्दै आधारभूत तहबाट अगाडि बढौं। सामाजिक धरातल मजबूत बनाउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्,यसैबाट NRN अभियान र नेतृत्व सफल हुनुकोसाथै गैर आवासीय नेपालीहरु वास्तवमै लाभान्वित हुने अवस्था सृजना हुन्छ!
(लेखक सिर्जनशील नेपाली समाज, ह्युस्टन टेक्ससका संस्थापक अध्यक्ष हुन् र लेखमा प्रयुक्त बिचार लेखकको नीजि बिचार हो- सं)
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार ००:३२ मा प्रकाशित